समाज Archives - Page2of2- Pardarshita
१२ आश्विन २०७७, सोमबार ०८:३४१२ आश्विन २०७७, सोमबार ०८:३४१२ आश्विन २०७७, सोमबार ०८:३४ by PardarshitaNo Comments
विश्व रेविज दिवसको अवसरमा विर्तामोड नगरपालिकाद्धारा निःशुल्क रेबिज बिरुद्धको खोप कार्यक्रम
विश्व जगत, समाज, स्थानिय निकाय, स्वास्थ्य
विश्व रेविज दिवसको अवसर पारेर विर्तामोड नगरपालिका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाले यहि मिति २०७७ असोज १२ देखि १८ गतेसम्म निःशुल्क रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सबैले आ—आफ्नो घर तथा समुदायमा रहेका सामुदायिक कुकुर र बिरालोहरू पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखामा ल्याई खोप लगाउनुहुन आम नगरवासीहरूमा अनुरोध गरेको छ । रेबिज एउटा भाइरस हो, यसलाई न्यूरोट्रोपीक भाइरस भनिन्छ । यस वर्षको विश्व रेबिज दिवसको नारा 'End Rabbies: Collaborate and Vaccinate' रहेको छ । यसै नारामा ऐक्यवद्धता जनाउदै नगरले यो निशुल्क खोप कार्यक्रमको आयोजना हरेक वर्ष झै गर्दैै आएको छ । विश्व रेबीज दिवस रेबीज रोकथामको लागि कार्य र जागरूकताको पहिलो र एक मात्र विश्वव्यापी दिन हो । यो समुदायको रूपमा एकजुट हुने अवसर हो । सेप्टेम्बर २८ विश्व रेविज विरुद्धको दिवश हो । यस वर्ष १४ औं दिवश विश...
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१८९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१८९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०९:१८ by PardarshitaNo Comments
कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरु संचालन हुदै ।
तस्वीर देवी माविका शिक्षक उमेर सरकाे Facebook बाट । विश्वव्यापिरुपमा देखापरेको कोरोना भाइरसका कारण देशभर बन्द रहेका विद्यालय खुल्न थालेका छन् । करिब छ महिना पछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न थालेका छन । सोही जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाले सोमबारबाट, तेमाल गाउँपालिकाले मङ्गलबारबाट सुरक्षा विधि अपनाएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । देशभरका अन्य स्थानीय तहहरुमा अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन सुरु भएको छ । झापामा रहेको सामुदायिक विद्यालय देवी माविले पनि स्मार्टबोर्डको प्रयोग गदैै अनलाईन माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेको छ । त्यसै गरी झापाको गरमनिमा रहेको दुर्गा माविका शिक्षकहरु समूहतालिका बनाई विद्यार्थीको घर घरमा गइ प्रत्यक्ष सिकाइ सहजीकरण गरिरहेको जनाएका छन । ...
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:४३८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:४३८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:४३ by PardarshitaNo Comments
व्हाट्सएपले भेटायो परिवार
ट्रेंडिंग, विश्व जगत, समाज
व्हाट्सएपले भेटायो परिवार विश्वका मानिसहरुको दैनिकी बनेको छ फेसबुक, व्वाट्स एप जस्ता सामाजिक संजाहरु । मनोरञ्जनका साथसाथै कसैको लागि यो वरदान पनि सावित भएको छ भने कसैको जीवन बर्वाद गरेको छ सामाजिक संजालहरुले । रुवाण्डामा भने सकारात्मक घट्ना घटेको छ । सन् १९९४ मा रुवाण्डन नरसंहारको घट्ना घटेको थियो । जसमा १०० दिनमा हुटु अतिवादीहरुले ८ लाख मानिसहरु मारेका थिए । यसै संहारमा परिवारबाट २ वर्षको कलिलो उमेरमा एक महिला छुटेकी थिइन । ती महिलाले भर्खर उनका आफन्तहरू व्वाट्स एप मार्फत भेट्टाएकी छिन । उनले सोशल मिडिया व्हाट्सएपले यो“चमत्कार“ गरेको भन्दै यसलाई धन्यवाद दिएकी छिन । नरसंहारमा उनीलाई उनीको दाजु सगै राजधानी किगालीमा ल्याएको थियो । केही समय पछि उनको दाजुको पनि मृत्यु भयो । उनी यती मात्र थाहा छ । त्यस पछि उनको जीवन आश्रममै वित्यो । उनीले लामो प्रयास गरिन परिवार खोज्न तर उनको...
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:१३८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:१३८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:१३ by PardarshitaNo Comments
पाल्पाका डा. मानबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रसिद्ध सहभागीमूलक विकास लेखन सम्मान’ बाट सम्मानित
Breaking News, ट्रेंडिंग, लाेकसेवा, समाज
बागमती प्रदेश सरकारका हालका प्रमुख सचिव पाल्पाका डा. मानबहादुर विश्वकर्मा २०७७ सालको ‘प्रसिद्ध सहभागीमूलक विकास लेखन सम्मान’ बाट सम्मानित भएका छन् ।दलितहरुको उत्थानमा धेरै समय देखि कलम चलाए वापत उहालाई नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) को २६ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा भर्चुअल कार्यक्रमद्धारा यो सम्मान प्रदान गरिएको हो ।उहालाई सम्मानपत्रसहित रु १० हजार राशिको यो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । उनी सावर्जनिक सेवामा सचिवको श्रेणी मा पुग्न सफल हुने नेपालको पहिलो दलित हुन् ।नेपानका पूर्व अध्यक्ष चेतनाथ कणेलद्धारा आफ्नो स्व. सुपुत्र प्रसिद्ध कणेलको स्मृतिमा २०७४ सालमा यो पुरुस्कारको स्थापना गरेका थिए । ...
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:५१७ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:५१७ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:५१ by PardarshitaNo Comments
हिमचितुवाको उपनामले चिनिने सगरमाथा आरोही आङरिता शेर्पा रहेनन ।
Breaking News, मुख्य समाचार, लाेकसेवा, समाज
कृत्रिम अक्सिजन नबोकी दश पटक सगरमाथा आरोण गरी साहसिक पहिचान बनाइ विश्व किर्तिमान गर्न सफल भएका आङरिता शेर्पाको सोमबार ७२ वर्षको उमेरमा १० बजे आफ्नै निवास काठमाडौँको जोरपाटीमा निधन भएको छ । उनको जन्म सन् १९४८ मा भएको थियो । उनको शेर्पा समुदायको परम्पारगत विधि अनुसार काठमाडौमा बुधवार अन्तिम संस्कार गरिएको छ । शेर्पाले सन १९८३ देखि १९९६ सम्म विनाअक्सिजन सगरमाथामा पाइला टेकेका थिए । विनाअक्सिजन उहाले पाकिस्तानको माउन्ट के टु, नेपालका चोयु, मनास्लु, ल्होत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरिलगायतका हिमालहरु आरोहण गरिसक्नु भएको थियो । विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही आङरिता शेर्पाको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सम्मान साथ अन्त्येष्टि गर्नुका साथै अन्त्येष्टि गरिने र सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । ...
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:४६७ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:४६७ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:४६ by PardarshitaNo Comments
विर्तामोड नगरपालिकाको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतमा गणेश दाहाल
Breaking News, Uncategorized, समाज, स्थानिय निकाय
विर्तामोड नगरपालिकाका निर्वतमान प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति खतिवडा भाद्र १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाश लिए पश्चात रिक्त भएको सो पदमा गणेश दाहाल सामान्य प्रशासनबाट निर्णय भई नियुक्त भएका छन् । गणेश प्रसाद दाहाललाई एक कार्यक्रम बिच असोज ७ गते नगरपालिकाको सभाहलमा विर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमूख एवम् कर्मचारीहरुले स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । असोज ७ गतेबाट विर्तामोडा नगरपालिकामा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको पदभार ग्रहण गरेका दाहाल यस अधि १ नं. प्रदेश मूख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत थिए । नगरप्रमूखले अध्यक्षता ग्रहण गरेको सो कार्यक्रममा दाहालले विर्तामोड नगरको विकास समग्र जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरुको संयुक्त प्रयासमा मात्र सफल हुने बताए । साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई सोहि दिन देखि नै सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टीमा ध्यान दिदै अनुशासनमा रहि सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए...